Allegro Integration - Tanga Kutengesa paAllegro nePropars E-Export!
Zviri nyore kubata yako Allegro chitoro nePropars!
Kutanga kutengesa muAllegro nePropars, uye zvigadzirwa zvako zvichatengeswa muPoland!
E-kutumira kunze kuri nyore kwazvo nePropars allegro kusangana!
Mirairo yeAllegro inounganidzwa pachiratidziro chimwe chete nemamwe maoda ako ese.
Unogona kutengesa zvigadzirwa zvaunowedzera kuPropars pane allegro nekudzvanya kamwe chete.
Poland-yakavakirwa musika Allegro ndiye asingapokane mutungamiri wemusika weEastern Europe uye mutambi mutsva mumusika weEurope. Allegro yave imwe yegumi misika mikuru yepamhepo pasirese, mushure mekukura kwayo kukuru munguva yekupedzisira.
Mukana wakakurisa weAllegro kune vatengesi nhamba yevatengesi yainotambira. Kunyangwe nhamba yevashandisi vanoshanda inopfuura 24 miriyoni zuva nezuva, mwero wevatengesi papuratifomu wakaderera zvakanyanya kupfuura vakwikwidzi vayo. Izvi zvinoreva kukwikwidza kwakareruka uye purofiti yakawanda kune vatengesi.
Kunyangwe Allegro iine chitarisiko chemusika wepanzvimbo, ichiri chikuva chakajairika chepasirese, kunyanya kuEastern Europe.
Mudunhu rino umo mamwe mapuratifomu makuru haasati apinda zvizere, Allegro inzira yekutengesa niche.
E-Commerce ikozvino inofanirwa kune bhizinesi rega rega. Mune ino kesi, haufanirwe kusiya yako ese e-commerce yakasungirirwa kune imwechete chikuva kana saiti. Kunyangwe hofori dzepasirese dziri kutora nzvimbo yelocomotive, kune misika yakawanda yedunhu yakasimba. Allegro mumwe wavo.
Inotungamirwa muPoland, musika uyu unogona kupa rudzi rutsva rwemari modhi yebhizinesi rako. Besides; Musika uyu, unotengeswa chinenge chigadzirwa chose uye nhamba yevatengesi haina kunyanya kukwira, ine mari yakawanda kupfuura iyo 5 misika mikuru muTurkey chete.
Zviri kwauri kuvandudza yako e-export network nekutora nzvimbo yako mumusika uyu niche. Zvese zvaunofanirwa kuita kusvika kune mumiriri wePropars. Propars ndeye Allegro's solution shamwari muTurkey uye inokupa rutsigiro mune zvese zvaungada.
Propars Allegro Kubatanidza
Propars-Allegro kubatana uye kubatanidzwa; Inokubvumira kuti utange kutengesa paAllegro. NePropar's advanced interface, unogona kuwedzera Allegro kune yako yekutengesa network uchitonga mapuratifomu epasirese pamwe nezvitoro zvako zvepamhepo muTurkey.
MuAllegro, ane rurimi rwaamai chiPolish, zvinokwanisika kutengesa chete nekuziva chiTurkey, nePropars panel. Fambisa zvigadzirwa zvako kune Propars pani uye uzvitengese zviri nyore paAllegro. Zvakare, ruzivo rwechigadzirwa chako rwunozoshandurirwa muchiPolish uye zviyero zvekuyera zvechigadzirwa chako zvinozongoiswa panzvimbo.
Iwe unogona kuona maodha ako kubva kuAllegro pane imwechete panhi uye buritsa e-invoice nekudzvanya kumwe chete.
Uyezve, kana iwe usina chitoro muAllegro, timu yePropars inovhura yako Allegro chitoro mahara muzita rebhizinesi rako!